असमाजिक कृयाकलापहरु बढ्दै गईरहेको प्रति प्रदेश प्रमुखद्धारा चिन्ता व्यक्त – Sanghiya Online
Posted on : January 28, 2019 - No Comment
माघ १४, महोतरी । समाजमा असमाजिक कृयाकलापहरु बढ्दै गईरहेको प्रति प्रदेश नं. २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
महोतरीको जलेश्वर ४ सुगा भवानीपट्टी स्थित श्री सुकदेव माविको स्वर्ण जयन्तीको समुद्धघाटनका क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । बिद्यालयहरुमा नैतिक शिक्षाको अध्यापनका अभावमा समाजमा असमाजिक तत्वहरु हावी हुँदै गईरहेको उहाँको भनाई थियो । उहाँले समय मिलाएर कमसे कम एउटा कक्षा नैतिक शिक्षा सम्बन्धी राख्न शिक्षकहरुलाई सुझाव समेत दिनुभयो । साथै उहाँले निति तथा कार्यक्रममा समेत प्रदेशले नैतिक शिक्षालाई समेट्ने बिश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै एक अर्को प्रसङमा उहाँले आफ्नो जन्मस्थल सुगामा रहेको निजी सम्पति तथा घरहरु समाजलाई सेवाश्रम मार्फत उपयोग गर्न दिईने जानकारी समेत दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश साँसद रानी शर्मा तिवारीले आफु अहिले राजपाबाट निर्वाचित साँसद भएपनि सबैका लागि सामान दृष्टिकोणबाट विकास कार्यमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले आफु अहिले विकासका लागि धेरै थोक गर्न चाहेपनि आफुले पाउँदै आएको सँसदीय बजेट अपुग भएकाले सबैठाउँको विकास गर्न नसकेकी बताईन ।
बि.सं. २०१२ सालमा स्थापना भएको सो माविको स्वर्ण जयन्ती २०६२ सालमा रहेपनि १३ बर्ष ढिलो गरी स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम मनाईएको छ ।
कार्यक्रममा बिद्यालयद्धारा स्वर्ण जयन्तीका अवसरमा केक काटेर स्मारिका पनि बिमोचन गरिएको थियो । पुर्व प्रधानाध्यापक सुनील चौधरीले बिद्यालयको अहिलेको व्यवस्थापन पक्षहरुमाथि असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए । साथै आफुलाई बिद्यालय परिवारले सम्मानजनक तरीकाले बिद्यालयमा आमन्त्रण नगरेको गुनासो समेत गरेका थिए ।
समारोहमा स्थापनाकाल देखि बिद्यालयमा योगदान पुरयाउँदै आएका व्यक्तिहरुलाई बिद्यालय परिवारले सम्मान समेत गरेको थियो ।
कार्यक्रम स्थलमा प्रदेश प्रमुखलाई भव्य स्वागत गरिएको थियो ।
रौतहटका एक यस्ता युवा, जसले रौतहट्को बिकासका लागि मन्त्रि भेट्न आए काठमाण्डौं